Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ပြင်သစ်ဘောလုံးကစားသမား Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB နာမတော်ဖြင့်လူသိများသည်သူတစ်ဦးကာကွယ်ရေး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Bosscielny"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံဖြစ်ရပ်မှန်များ (နည်းနည်း-လူသိများ) ရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့ရန်လိုခုခံစွမ်းရည်အကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့ Laurent Koscielny ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Laurent Koscielny အကြီးအကျယ်ယင်း၏နိုင်ငံသားများဆန့်ကျင် stacked လေးသာမှုနှင့်အတူ, ပြင်သစ်၏ Limousin ဒေသနှင့်ဘောလုံးကစားရန်တစ်ဦးကမှားရာဌာန၌တတိယအကြီးဆုံးမြို့, tulle အတွက်စက်တင်ဘာလ 10 ၏ 1985th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ Laurent Koscielny အတူတူသူတို့၏သားနှင့်အတူပိုလန်လူမျိုးပေါင်းစုံကိုင်ထားသူကိုမစ်စတာနှင့်မစ္စဘား Koscielny မှမွေးဖွားခဲ့သည်။
Laurent, tulle အတွက်သတ္တုတူးဖော်ရေးမိသားစုထဲမှာနေရာတစ်နေရာအလယ်ပိုင်းပြင်သစ်တွင်ဆက်သွယ်ရေးကြီးပြင်း တဦးတည်းရဲ့ခြေရင်းနားမှာနေတဲ့ဘောလုံးကွင်းရှိပါတယ်သည့်အခါအနတ္တအဆုံးသတ်ရှိရာ။ အဆန်းမဟုတ်ပါလျှင်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝပုံပြင်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - တစ်ဦး၏ ဇာတ်လမ်းစညျးစိမျဖို့အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းနှင့်အတူနည်းနည်းကောင်လေး အဘယ်သူသည်ထူးခြားသောအခွက်တဆယ်နှင့်အတူမင်္ဂလာဖြစ်လာခဲ့သည်။ Laurent သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကာလအတွင်းသူ၏အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာစေမယ့် steely ပြဌာန်းခွင့်ပိုင်တော်မူ၏။ မိမိအရည်မှန်းချက်ရုံဖြတ်သန်းဖန်စီကြဘူး။ ဘောလုံးအဘို့အ Laurent ရဲ့သဏ္ဍာန်, ချည်ထားပေမယ့်ဒီဂိမ်းထဲမှာလုပ်ဘယ်တော့မှသောမိမိအစ်ကိုဖြစ်သူကိုကျေးဇူးတင်လာ၏။
သူ၏စကားအတွက် ..."တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားအဖြစ်ကစား၏စိတ်ကူးတစ်ခုသာမျှသာအိပ်မက်, ငါ့အသက်အရွယ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကလေးအတှကျမြျှောလငျ့နိုင်စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့မျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်မစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောအရာနောက်တဖန်, ဘောလုံးကစားရန်ကစားကစားရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းသူတို့နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အချိန်ဝေမျှခြင်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားခြင်း။ ဘောလုံးကစားခြင်းကိုငါ့အသက်အရွယ်အများစုကလေးငယ်များပါလိမ့်မယ်နဲ့တူငါစိတ်ပူခဲ့တာအားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အနှစ်ချုပ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
Laurent Guingamp, ကဲ့သို့သောအခွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကွောငျးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူ 2004 ၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင် Didier ဒရော့ဘာ နှင့် Florent Malouda။ သူကနောက်ကျောတစ်ဦးလက်ျာလက်တော်အဖြစ်သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘစတင်ခဲ့သူရေတွက်ပြီးမှတစ်အင်အားစုဖြစ်လာသည်ရှေ့မှာသာသုံးနှစ်ကယူခဲ့ပါတယ်။ Laurent သူ fullback မှ switched ဘယ်မှာ Guingamp အကြီးတန်းကစားသမားမှရာထူးတိုးခံရဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်သည့်အလုပ်, ယဇျပူဇျောနှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုတွေအများကြီးလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ အဖြစ်မကြာမီ Laurent 18 နှစ်အရွယ်မှာသကဲ့သို့, သူသည်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်ငါ၏မိသားစုများအတွက်များကိုပိုက်ဆံချွေတာစတင်ခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းတွင်သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပြင်သစ်ထိပ်တန်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဘောလုံးကွင်းတစ်မြှင့်တင်ရေးအရကူညီပေးနေ, Tours မှနှင့် Lorient အဘို့ကစားအဖြစ်ပြင်သစ်လိဂ်အဆင့်တက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ဒါဟာ7ဇူလိုင်လ 2010 အပေါ်သူ၏လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်သူကိုအာဆင်နယ်ဆွဲဆောင်ကြောင်း Laurent ရဲ့ရန်လိုခုခံကာကွယ်စတိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအာဆင်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သဘောတူညီချက်တံဆိပ်ခတ်ပေမယ့်တောင်အာဖရိကမှာကြီးအိမ်မှာကသူ၏မိုဘိုင်းဖုန်း left ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဆင်နယ်နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်မပေးနိုင်ဘူး။ အဲဒီပြင်သစ်သတင်းစာများသူဝင်းဂါးအားဖြင့်အပြီးသတ်သည်သူ၏အပြောင်းအရွှေ့ကြေညာချက်နှင့်သဘောတူညီမှုမရဘဲသည်သူ၏အာဆင်နယ်အသင်းဖော်တွေနဲ့လေ့ကျင့်ပေးဖို့အပေါ်သှားသောအစီရင်ခံအဖြစ် Koscielny ဟာလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေ၏အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာအပြီးသတ်နှင့်ယခင်ကဖူလ်ဟမ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ Philippe Senderos, ဝတ်ဆင်ကလပ်ရဲ့နံပါတ်တစ်6ရှပ်အင်္ကျီ, လက်သို့အပ်ခဲ့သည်။
Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
အလုပ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကောင်းတဲ့အပိုင်းအစညာဘက်အရပျ၌နှင့်လက်ျာအချိန်တွင်ညာဘက်လူတစ်ဦးလိုအပ်ပါသည်တဲ့စကားပုံရှိပါသည်။ အကယ်စင်စစ်, Laurent Koscielny ရဲ့ On-စေးလူတစ်ဦးဆင်းလှသောခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံခဲ့သောတစ်ဦးကိုချွတ်-စေးဘဝရှိပြီး သက်တမ်းကြာရည်းစားကို Claire Beaudouin ။
နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများအာဆင်နယ်နှင့်တက်ရောက်သူများတွင်ဖြစ်ခြင်းပြင်သစ်အသင်းဖော်များ၏အရေအတွက်နှင့်အတူတစ်နှစ် 2015 အတွက်လက်ထပ်တယ်။
ပြင်သစ်သတင်းစာတွင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပုံရတယ်ပေမယ့် Raphael Varane ရဲ့ ထိုနေ့ရက်တွင်ဖြစ်ပျက်ရသောမင်္ဂလာဆောင်။ Koscielny ပြင်သစ်သတင်းစာကသူ့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနား၏ဓာတ်ပုံများကိုယူခွင့်မပြုခဲ့ပေ။ ကျနော်တို့သာ Koscielny ရဲ့ Bacary Sagna ရဲ့ဇနီး Ludivine မှ လာ. အွန်လိုင်း posted ခံရဖို့အနည်းငယ်တစ်ဦးအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများရောင်းဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းယူဆပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
Laurent နှင့်ကို Claire အမည်များနှစ်ခုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေရှိသည် ဖြစ်. , Maina နောဧ Koscielny ဟာသူတို့ရဲ့အဖေနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ။ "ကျနော့်သားသမီးတို့သည်ငါ့ကိုအသက်တာ၌ရှေ့ဆက်ကူညီပေးခဲ့သည်"။ Laurent ဆိုပါတယ်။
မိမိအလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများပြီးနောက် Laurent ကျောင်းကိုမှာမိမိလေးတွေကောက် သွား. သူ၏ဇနီးအလုပ်ကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါမွန်းလွဲ၏အဆုံးသည်အထိသူတို့နောက်ကိုကြည့်ဖို့ချစ်တော်မူ၏။
Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုအချက်အလက်
သူ့မိသားစုနှင့်အတူချွတ်စတင်ကာ Koscielny ရဲ့အဘိုးပိုလန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာပိုလန်မိုင်းလုပ်သားအဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်မြောက်ပိုင်းပြင်သစ်မှပြောင်းရွှေ့အခြေချ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အချိန်ကျော်သူနှင့်သူ၏မိသားစုကအခြားအဖွဲ့ဝင်များနှစ်ဦးစလုံးပိုလနျဘာသာစကားနှင့်အမြစ်များဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Laurent ရဲ့ဖခင်တစ်ဦးမန်နေဂျာဖြစ်လာမတိုင်မီအများအပြားကလပ်အသင်းများအတွက်ပြင်သစ်ဘောလုံး၏စတုတ္ထဌာနခွဲများတွင်ကစားခဲ့။ Koscielny ကိုမွကွေီးမှသူ့ကိုချစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူမှလာနှင့်မည်သို့သူသည်မိမိအမြစ်များမှစစ်မှန်တဲ့နေဖို့သင့်တယ်ဘယ်မှာသူ့ကိုအစဉ်အမြဲသတိရကူညီမှုအတွက်သူ၏ဖခင်, ဘားအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သူ၏အဘသည်အလွန်ကောင်းစွာဘောလုံးလောကီသားတို့သည်နားလည်သဘောပေါက်သောသူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးကြီးတွေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Koscielny ကထည့်လေ့မရှိအဖြစ် ..."သူကကျွန်မ grounded ငါ့ခြေများကိုမစောင့်ဘဲနေလျှင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သောအရာကိုသိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သူအမြဲငါ့ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ငါလုပ်လိုရွေးချယ်မှုအပေါ်ငါ့ကိုအကြံပေးဖို့အမြဲပစ္စုပ္ပန်နျြရစျ။ ငါကအရမ်းကံကောင်းကြပြီထင်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့မိဘများနှင့်ငါ့မောင်နှမကနေနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောပညာရေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဖိုးများကိုသင်ပေးတယ်။ ယနေ့ပြုလုပ်ငါ့သားသမီးတို့သည်ထိုထုတ်လွှင့်ဖို့ကိုငါ့အလှည့်ဖြစ်၏။ "
Laurent Koscielny ရဲ့အမေကအမြဲမိခငျထောက်ခံမှုပေးသူ့ကိုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်နေဆဲယနေ့သူမသူ၏ဘဝ၌အလွန်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကထည့်လေ့မရှိအဖြစ်: "သူသည်နှင့်အစဉ်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အသက်တာ၌တစ်ဦးမရှိမဖြစ်ကိန်းဂဏန်းခဲ့: တစ်အုပ်ထိန်းသူကောင်းကင်တမန်တပါးသည်" ။ သူကသူ့ကိုထက် 10 နှစ်ပေါင်းအဟောင်းများဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်ကအပျော်တမ်းလိဂ်ကစားသူတစ်ဦးဘောလုံးအစ်ကိုရှိပါတယ်။
Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Laurent Koscielny ကသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
Laurent အားသာချက်များ: သူက (ကလပ်နှင့်ဇနီးနှစ်ဦးစလုံး), ယူထားတဲ့, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အလုပ်ကြိုးစားသူနှင့်အလွန်လက်တွေ့ကျသစ်စာစောငျ့သိသည်။
Laurent ရဲ့အားနည်းချက်များ: ရှက်ကြောက်စိတ်, ကိုယ်ပိုင်နှင့်အခြားသူများ၏အလွန်အမင်းအရေးပါ, ပစ္စည်းပစ္စယကျော်စိတ်ပူရနဲ့အားလုံးအလုပ်နှင့်မျှမကစားသူတစ်ဦးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဘူး။
အဘယ်အရာကို Laurent likes: သူကတိရစ္ဆာန်, ကျန်းမာအစားအစာ, စာအုပ်များ, သဘောသဘာဝနှင့်အထွေထွေသန့်ရှင်းမှု likes ။
Laurent နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: ရိုင်းစိုင်းအကူအညီတောင်းနှင့်အလယ်ဗဟိုစင်မြင့်တာ။
Laurent အမြဲအသေးဆုံးကအသေးစိတ်အာရုံစိုက်ပေးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သူ၏နက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပာယ်သူ့ကိုသင်သည်အစဉ်အသိရကြပါလိမ့်မယ်အရှိဆုံးသတိထားလူတစ်ဦး၏တစ်ဦးကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဘဝမှသူ့နည်းချဉ်းကပ်ဘာမျှအခွင့်အလမ်းမှထွက်ခွာကြောင်းသေချာ။ Laurent သူဖော်ပြနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့မဟုတ်သောကွောငျ့, ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်မှဆန့်ကျင်လာသောအခါသူသည်တရားဝင်စစ်မှန်တဲ့, ဒါမှမဟုတ်ပင်သက်ဆိုင်ရာအဖြစ်သူ၏ခံစားချက်များကိုလကျမခံပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြာခဏနားလည်မှုလွဲနိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ချစ်ကြည်ရေး
မိမိအအာဆင်နယ်ကစားသမားဘ၏အစဒါချောမွေ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော်ရှေ့မှာကြာခဲ့ပါဘူး အာဆင်နယ် မိမိအရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျပြီးတော့ကတည်းက Laurent ဒဏ္ဍာရီမန်နေဂျာမှမိမိကိုမိမိထုံးစံသိရသည်။
Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Q & A တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
Laurent အကြောင်းကို သိ. တန်ဖိုးရှိအချို့ QA သို့မေးခွန်းများကိုဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ အောက်ပါအောက်ပါမေးခွန်းများကိုနှင့်သူ၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်မှာရှိ / အရာ ဂိမ်းသင်သည်သင်၏အကြီးမားဆုံးဆုတ်ယုတ်မှုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့တာလဲ
ပြင်သစ်အတွက်ယူရို၏နောက်ဆုံး။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်ပြင်သစ်တွင်မျှော်လင့်ထားကြောင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါခြုံငုံကအောငျမွငျခဲ့ကြောင်းထင်ပေမယ့်တစ်ဦးရှုံးနိမ့်နှင့်အတူအဆုံးသတ်အလွန်နာကျင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုလမ်းများတွင်ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုစွန့်စားမှုပြီးတစ်ခါးသောခံစားမှုအစဉ်အမြဲရှိပါသည်။
ဘယ်တော့လဲ သငျသညျကိုလယ်ပေါ်ထွက်မသွားပါတော့မည်, သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်း
ငါလယ်ပေါ်ထွက်သွားရတဲ့အခါ, ကျနော်လုပ်ဖို့ငါရှိသည်အရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးကျနော်တို့လက်ချည်အခမ်းအနားများနှင့်အတူပြုသောအမှုဖွင့်တစ်ချိန်ကကျွန်မရဲ့ဂိမ်းအပေါ်သာငါ၏အဂိမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ကြိုးစားပါကအကြောင်းအများကြီးမစဉ်းစားကြဘူး အဆိုပါပွဲစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်မအကောင်းဆုံးရလဒ်ရှိသည်ဖို့, ငါ့အသင်းကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laurent Koscielny ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
သီယာရီအွန်နရီကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Mendy ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Issa Diop ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Tanguy Ndombele ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်